Adeegyada bangiyada ee Kuweyt - ALinks
Kuweyt hadda waxay leedahay kow iyo toban bangiyada wadaniga ah. Bangiga Dhexe ee Kuweyt wuxuu nidaamiyaa bangiyada dalka, wuxuu hubiyaa xasilloonida Dinar Dinar, wuxuuna u shaqeeyaa sidii bangi iyo lataliye xagga dhaqaalaha ee dowladda. Qeybaha bangiyada ee Kuweyt, sida laga soo xigtay Moody's, waa mid adag, iyada oo loo aaneynayo hay'adda qiimeynta aaminsanaanta in mashaariicda ay maalgeliso dowladdu ay sii wadi doonaan kicinta kobaca dhaqaalaha iyo, natiijada, hagaajinta howlaha bangiga Liiskan bangiyada waaweyn ee Kuweyt waa bar bilow waxtar u leh qof kasta oo daneynaya xirfad ka shaqeynta bangiyada Kuwait. Ka eeg liiska hay'adaha maaliyadeed wixii macluumaad dheeraad ah.
Waa kuwan qaar ka mid ah bangiyada ugu sarreeya Kuwait.
Bangiga Qaranka ee Kuweyt
Marka la eego wadarta hantida, Bangiga Qaranka ee Kuweyt (NBK) waa bangiga ugu weyn dalka. Waxay ahayd bangigii ugu horreeyay ee waddani ah iyo shirkaddii ugu horreysay ee saamileyda ah ee aagga Gacanka Carbeed, oo la aasaasay 1952. Sida laga soo xigtay Global Finance, NBK wuxuu hadda ka mid yahay saddexda bangi ee ugu ammaansan Bariga Dhexe. Waxay shaqaalaysiisaa in kabadan 7,000 oo shaqaale waxayna leedahay shabakad wadanka oo dhan ka kooban 70 goobood iyo 310 ATM. Bangigu wuxuu lahaa wadarta hantida US $ 98 bilyan illaa Diseembar 2020.
Guriga Dhaqaalaha ee Kuweyt
Iyadoo wadarta hantida ku dhow US $ 60 billion, Kuwait Finance House (KFH) waa bangiga labaad ee ugu weyn Kuwait. Bangigii ugu horreeyay ee Islaami ah waxaa laga aasaasay dalka 1977. Dhammaan ficillada waxaa lagu fuliyaa si waafaqsan shareecada Islaamka. Ururku wuxuu siiyaa shirkado iyo bangiyada shaqsiyadeed, bangiyada gaarka loo leeyahay, maalgashiga iyo Immobiliare, maaliyadda ganacsiga, maalgelinta baabuurta, bangiyada internetka, barnaamijyada bangiyada moobaylka, kaararka deynta iyo kuwo kale. Bahrain, UAE, Germany, Turkey, Malaysia iyo Saudi Arabia, KFH waxay si firfircoon uga shaqeysaa caalamka.
Iyada oo loo marayo shabakadeeda laanta gobolka ee 167 goobood, waxay ku bixisaa bangiyada iyo adeegyo maalgashi. Bangiyada shirkadaha iyo maalgashiga, bangiyada gaarka loo leeyahay, bangiyada tafaariiqda iyo qasnadda ayaa ah qeybaha ugu waaweyn ee ganacsiga Bangiga. Bangiga Gacanka Algeria, Tunis International Bank, Burgan Bank Turkey iyo Bangiga Baqdaad waa hoosaadyo ka tirsan Kooxda Burgan Bank. Shirkaddu waa bangiga saddexaad ee ugu weyn Kuwait oo leh 24 bilyan oo doollar oo wadar ahaan hantida ah, macaamiisha dhigata 12.4 bilyan oo doollar iyo 14 bilyan oo deyn ah.
Bangiga Gacanka ayaa ah bangiga afraad ee ugu hantida badan Kuwait. Waxaa la dhisay 1960-kii hadana waxay leedahay shabakad ka badan 60 laamood iyo 200 ATM. Shirkada waxaa ku sifoobay "A" shirkadaha qiimeynta sare (Standard & Poor's, Moody's iyo Fitch). Waxay bixisaa xisaabaadka hadda, keydka iyo mushaharka, MasterCard iyo Visa, kaararka debit iyo lacag bixinta, khidmadaha, caymiska safarka, bangiga mobilada iyo khadka tooska ah, sanduuqa aaminka ah iyo amaahda macaamiisha, amaahda baabuurta ee cusub ama la isticmaalay, amaahda guryaha, amaahda lacageed ee dammaanadda leh, hawlgabka iyo maalgelinta maalgashiga. . Waxay kaloo bixisaa adeegyo ballaaran.
Bangiga Ganacsiga ee Kuwait
Bangiga Ganacsiga ee Kuweyt waa mid ka mid ah 10-ka hantida ugu badan, dhigaalka, amaahda, dakhliga iyo bangiyada dakhliga ee kuwait. Qeybaha ugu waaweyn ee Bangigu waa: Bangiyada tafaariiqda, Qeybta Amaahda Shirkadaha, IBS, Qeybta Maaliyadda & Qeybta Maalgashiga, Qeybta Maareynta Khatarta iyo Qeybta Howlgallada. Waaxaha aasaasiga ah ee Bangigu waa: Shirkaddu waxay xarunteedu tahay Kuwait, Kuwait, waxaana ka shaqeeya 1490 shaqaale ah. CBK wuxuu leeyahay qiimeynta amaahda muddada dheer ee Moody iyo Fitch ee A3.
Marka laga reebo bangiyada faahfaahinta waxyaabaha ugu muhiimsan ee qof walba doonayo inuu ogaado waa sida aad akoon uga furan karto bangiyadan. Waa tan sharaxaad kooban oo ku saabsan sida qof ajnabi ah uu uga furan karo koonto banki Kuwait.
Sidee loo furaa Xisaab Bangi Kuweyt?
Waa inaad tahay degane Kuwait si aad u furato xisaab bangi Kuwait. Bangigu wuxuu rabaa fiisadaada degenaanshaha iyo Shahaadadaada Diidmada Diidmada (shahaadada diidmada, NOC) inay ka helaan loo-shaqeeyahaaga ama kafaala-qaadahaaga kahor imaatinkaaga markaad diyaar u tahay inaad sameysato koontadaada deegaanka. Bangiyada qaarkood ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku weydiiyaan sawirradaada, heshiiska kireysigaaga iyo baasaboorkaaga.
Bangiyada badankood waxay leeyihiin akoonno hadda jira, mushahar iyo keyd. Bangiyo badan ayaa aqbala xisaabaadka wadajirka ah. Qaar ka mid ah ajaanibta ayaa soo sheegay in loo diiday koontada wadajirka ah ee lamaanaha isqaba sababta oo ah faafitaanka aad ugu badan ee Kuweyt. Waad furan kartaa koontadaada kaligeed iyada oo laguu oggol yahay in laguu kafaala qaado haddii aadan diiwaangelin karin koonto wadaag ah isla markaana xaaskaaga / saygaaga uusan ka shaqeynaynin Kuweyt.
Adeegyada bangiyada ee KuweytBangiyada KuweytKuwaitNidaamka Bangiyada Kuwait
Bangiyada iyo adeegyada maaliyadeed ee Hong Kong
Bangiyada ugu sareeya UK